HR Staff for Parami Hospital | Job in Myanmar
Jobs in Myanmar, jobs in Yangon - HR,Training & Recruitment jobs - HR Staff
To be the centre of excellence in the provision of the most up-to-date, accurate and reliable advanced diagnostic service, using state-of-the-art technology for patients of all ages.
Nowadays, people in Myanmar are becoming increasingly aware of the importance of comprehensive quality health care and are seeking international standard health services.To meet this need, the Board of Directors (BOD) of Royal Parami Life Sciences Co. Ltd. officially launched Parami Hospital in 2010.In striving to beaCentre of medical excellence, the BOD developed Mission and Vision statements to embodyastrong commitment for providing consistent excellent patient care services and satisfaction, placing safety asapriority.
HR Staff (Full Time)
•	တက္ကသလိုလ်မှ ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိပြီးသူဖြစ်ပြီး HR Diploma (or) HR Certificate ရရှိထားသူဦးစားပေးမည်။
•	HR လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ပြီး အင်္ဂလိပ်စာ4skill ရှိရမည်။
•	ကွန်ပျူတာစာစီစာရိုက်ကျွမ်းကျင်ပြီး Internet & Email အသုံးပြုနိုင်ရမည်။
No (60) ,(G-1),New Parami Road, Mayangone Township
Company Industry: HR Staff
•	အတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး (၅)နှစ်ရှိရမည်။ •	ဆေး� ...
•	Computer အခြေခံနားလည်သူဖြစ်ရမည်။ •	သူနာပြုသင်� ...
•	လျှပ်စစ်လုပ်ငန်းနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်င� ...
•	Marketing နှင့်ပတ်သတ်၍ Diploma or Certificate ရရှိထားသူဖြစ်ရမ� ...
•	Oxygen လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သတ်၍ အတွေ့အကြုံ ရှိသူ� ...
•	Network Engineer Certified, Practical A+ Certified ဖြစ်ရမည်။ •	နေ့/ည တာဝန်ထ ...
•	Marketingလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူ၊ဆေးရုံလုပ်င� ...
•	ရုပ်ရည်သန့်ပြန့်ရည်မွန်ပြီး၊လူနာများအေ� ...
•	Security လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူ ဖြစ်ရမည်။ •	Fir ...
•	ဆရာဝန် လိုင်စင်လက်ဝယ်ကိုင်ဆောင်ထားသူဖြစ� ...
•	Marketing လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ပြီး ဆေးရ ...
•	လိုအပ်ပါက ခရီးသွားလာနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	က� ...
•	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်၍ အများနှင့် အလ ...
•	ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းမွန်၍ အများနှင့် အလု ...
•	ဆက်ဆံရေး ပြေပြစ်ကောင်းမွန်၍ အများနှင့်အလ ...
•	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်၍အများနှင့်အလ� ...
•	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ရှိသူဦးစားပေးမည်။ •	� ...
•	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ပြီး အများနှင့� ...
•	လိုအပ်သော ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်း၊အခြားဝယ်ယူေ� ...